गर्भावस्था पर्नु: यो डरलाग्दो छ
धेरै गर्भवती महिला को लागि, सबै भन्दा खतरनाक समय जब सडकमा चिप्लो बन्न, को जाडो र प्रारम्भिक वसन्त छ, र त्यहाँ स्लिप एक संभावना छ। निस्सन्देह, गिरने को साह्रै डर हेरचाह आमा र गर्भमा उफ्रने बच्चा को स्वास्थ्य हानि। कि त यो गर्भावस्था मा खतरनाक ड्रप छ?
पहिले, यो एक महिलाको शरीर एक विशेष तरिकामा डिजाइन गरिएको छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। गर्भमा, बच्चा गिरावट मा झटका नरम भनेर सुरक्षा कारक को एक नम्बर द्वारा घेरिएको छ। कारण भ्रूण को बच्चा, र आन्तरिक अङ्गहरू सजिलै उत्प्रेरित गर्छ र प्रभाव रूपमा आमा देखिन्छ धेरै महसुस गर्दैन जसमा तरल पदार्थ गर्न। यसरी, गर्भावस्था मा गिरावट छैन पनि भविष्यमा बच्चाको स्वास्थ्य असर गर्न सक्छ। तर एकै समयमा, बलियो झटका फिर्ता वा भुँडी मा भ्रूण को सामान्य विकास असर गर्न सक्छ। तसर्थ, कुनै पनि मामला मा, तपाईं सचेत हुन र डाक्टर भ्रमण गर्न निश्चित हुनुपर्छ।
दोस्रो, पनि उज्यालो पछि आफ्नो राज्य नजिक ध्यान आवश्यक गिरावट। पानी वा रातो छुट्टी हो भने, क्षतिग्रस्त placenta वा amniotic बबल शुरुवात पत्र कि एक संभावना छ। यस मामला मा, तुरुन्तै प्राथमिकताको गर्भावस्था को समयमा एक महिला हेरिरहनुभएको छ जो एक डाक्टर संग सम्पर्क र थप कार्यका लागि निर्देशनहरू प्राप्त। र सल्लाह साथीहरू र नातेदारहरूले एक योग्य पेशेवर को सिफारिसहरू गर्दा पूर्ण विश्वास गर्न सक्छन्, आवश्यक साँचो होइन भनेर सम्झना।
एक महिला गर्भावस्था को समयमा खसेको छ भने, फरक छैन धेरै सुखद परिणाम शब्द आधारमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, यो amniotic तरल पदार्थ सबै अचानक आन्दोलनहरु सहित जब गिरावट एक cushioning प्रभाव प्रदान गर्नुहोस्। तर तिनीहरू पूर्णतया मुख्य झटका को गर्भाशय को क्षेत्र मा गिर भने, आफ्नो बच्चाहरु रक्षा गर्न सक्दैन। यो दुःखी नतिजा गर्न सक्छ। पछि गर्भावस्था, त्यसैले नतिजा एक हुन सक्छ पहिले जन्म, गर्भपात - र प्रारम्भिक।
गर्भावस्था मा गिरावट एकदम अक्सर हुन्छ भनेर कुनै आश्चर्य। कारण वजन गर्न मेरुदण्ड मा लोड वृद्धि गर्दा एउटा महिला जीवन, आफ्नो सामान्य राज्य लागि अत्यधिक असामान्य प्रवेश गर्छ। यो सबै केही clumsiness तिर जान्छ, र यसैले, यो जान धेरै असुविधाजनक बन्नेछ। यस पछि गर्भावस्था को चरणमा gait महिलाहरु रूपमा नाटकीय वृद्धि पेट विशेष परिवर्तन गर्दै गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र को एक बदलाव जान्छ। Instinctively, को expectant आमा मेरुदण्ड मा लोड कम गर्न प्रयास गरिएको छ, र यो अलिकति पछाडि बाङ्गिएको थिए रूपमा यो उद्देश्य लागि, जब हिड्ने। एक भिजेको वा चिसो सडक मा यो मुद्रा ब्यालेन्स को हानि प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ र फलस्वरूप गिर। साथै, एक गर्भवती महिला छरिएका पाइहाल्छन् र ख्याल राख्नुहुन्छ जोडतोडले र चल्छ समयमा सचेत।
गर्भावस्था जो2समूह विभाजित गर्न सकिन्छ विभिन्न जटिलताहरू, निम्त्याउँछ समयमा अक्सर पतन:
गैर-obstetric जटिलताहरू यस्तो मर्काइ, contusion भंग रूपमा भ्रूण को विकास मा धेरै प्रभाव, छैन। obstetric समूह सम्बन्धित जटिलताहरू placental abruption, र धेरै अन्य कारण आक्रान्त, उदाहरण, पहिले पानी को लागि, भविष्यमा बच्चा को राज्य मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव छ।
गर्भावस्था मा गिरावट भ्रूण बिगार्न अन्त्य, क्षति देखि आन्तरिक अङ्गहरू गर्न लिएर धेरै भयानक परिणाम हुन सक्छ। पहिलो गिरावट पछि केही मिनेट, र उत्तरार्द्ध एकैचोटि देख्न सकिन्छ। पहिलो, हामी बच्चा सार्दा छ कि छैन ध्यान गर्नुपर्छ, र यी perturbations कसरी आउँदैन। छ, यो आवश्यक त्यहाँ आफ्नो बच्चाहरु कदम को आवृत्ति र बल मा कुनै पनि परिवर्तन हो कि पहिल्याउन, समस्या उत्पन्न को रूपमा यो चिन्ह हुन सक्छ छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यो ढिलाइ बिना आवश्यकता को गिरावट पछि सामान्य अवस्थामा कुनै पनि विचलन लगािन्छ गर्दा विशेषज्ञ सहायता प्रदान गर्न सक्षम हुन वा सबै डर dispel गर्न गर्ने एक विशेषज्ञ, परामर्श गर्न।
उर्वर फाइब्र्रोइड र गर्भावस्था
गर्भावस्था बेला मूत्र मा एसिटोन को खतराहरू।
Basal तापमान - यो के हो? प्रारम्भिक गर्भावस्था बेला Basal तापमान
यसलाई गर्भवती महिला उठबस गर्न सम्भव छ? के तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ र गर्भवती महिलाका लागि के गर्न सक्दैन
VVC मा मत्स्य पालन गाउँमा: विवरण र फोटो
कफी जार्डिन: प्रकार
सोनी प्रोजेक्टर को Camcorder मा बनाएको छ
गाउट: आहार धेरै महत्त्वपूर्ण छ!
डेकल - यो के हो? सुविधाहरू, लाभ र बेफाइदा।
अचार: मसालेदार तरकारी नुस्खा
GEF मा चित्रकला भाषा, गणित को विकास को लागि प्रिपेरेटरी समूहमा सत्र को सारांशमा,
घनिष्ठ radiators? यो विधि र embodiments
Hypoglossal स्नायु। को hypoglossal स्नायु को परीक्षा
मुख्य डाटा संग्रह विधिहरू